Senator Ayuub Ismaaciil “Waxaan canbaaraynayaa tacaddiga loo geysanayo Safiya Tusmo” – Kalfadhi
Senator Ayuub Ismaaciil “Waxaan canbaaraynayaa tacaddiga loo geysanayo Safiya Tusmo”
April 22, 2021 Hassan Istiila
Waxaa isoo gaartay muuqaal la soo geliyey baraha bulshada oo muujinaya tacaddi loo geysanayo Safiya Tusmo. Runtii waa wax aad looga xumaado, waana ayaan-darro in ficilada noocaasi ah ay ka dhacaan gudaha maamul ku doodaya inuu yahay mid dimuquraaddi ah oo ilaalinaya xuquuqda aadanaha ee muwaadiniinta oo dhan, oo aan u kala soocayn muwaadiniinta derejada kowaad; oo ah cidda denbi kasta oo ay geysato aan loo qabsanayn, iyo cidda denbi walba lagu samayn karo.
Anigoo ku hadlaya sifadayda ah Senator ka tirsan baarlamanka Federaalka Soomaaliya, kana soo jeeda oo metela dadka Awdal, waxaan ereyada ugu adag ku canbaaraynayaa falkaasi waxashnimada ah ee ka horjeeda xuquuqda aadanaha iyo dhaqankeena Soomaaliyeed ee suubban. Waxaan sidoo kale ku eedaynaya maamulka Somaliland in uu ka gaabiyey sidii ay cadaalad u heli lahayd Safiya Tusmo, waxana aan oran karnaa inuu gabbaad siiyey dadkii falkan geystay. Somaliland waa in ay caddaysaa meesha ay ka taagan tahay tacadigan, haddii ay sidaa uga gaabsatona, waxaan u aragnaa inay la jirto dhinaca danbiilayaasha. Waxaa jira tuhun weyn oo runtii jiritaankiisu xooggan yahay, waana in Somaliland ay la safan tahay dhinaca ama dadka jariimadan iyo dulmigan weyn geystay, waxana sii muujinaya sida ay ilaa iyo imika uga aamusan tahay.
Waxaan ugu baaqayaa dadka reer Awdal ee sharaftooda meesha looga dhacay in ay is xakameeyaan oo aanay geysan ficillo abuuri kara dhibaato hor leh. Waa in caddaaladda Safiya Tusmo lagu raadiyaa qaab nabdoon oo silmi ah.
Arrintan waxay isugu jirtaa dhaqan iyo dawlad, waana in labada dhinac ba sidaa loo galaa oo xal loo Raadiyaa. Anigu qaybtayda waan ka qaadanayaa in Safiya ay caddaalad hesho, waxaan si dhow xiriir ula samaynayaa dhinacyada ay khusayso, waxana rajaynayaa in xal degdeg ah loo heli doono arrintan.
W\_Q Senator Ayuub Ismaacii Yuusuf.
NB: Qoraalkan wuxuu gaar u yahay qoraaga.
Saraakiil ka socda AMISOM iyo dowlada UK oo maanta ka qeyb-galay shirka Golaha Amniga Koonfur-Galbeed
Puntland oo ka hortimid muddo kordhintii Golaha Shacabka uu u sameeyay hay’addaha dowladda federaalka